XBOX 360 နဲ့တစျခုမှာ 2018 အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်း: အဆင့်ထိပ်တန်း 10 ဦး - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
2018 အတွက်, Xbox များအတွက်ထိပ်တန်း 10 ဦးကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်း
Xbox One မှာအပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်း 2018 ခုနှစ်သက်သက်သာငြိမ်းချမ်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့အသုံးပြုသူများပင်လယ်ဓားပြဘဏ္ဍာကို၏ search အတွက်ရှည်လျားသောခရီးသှားဖို့ဖြစ်လာရဲအရာရှိရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုကိစ္စ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်လက်ထောက်အဖြစ်ငုပ်ခွင့်ပြု - ခဏသာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကောက်ပဲသီးနှံများစိုက်ပျိုးသောသူသည်ရိုးရှင်းသောလယ်သမားဖြစ်လာရန်, ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ရောင်း။ ပို. ပင်အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ခြေ - Xbox ဂိမ်းစက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဂိမ်းထဲမှာ 360: 2018 ပုချုပ်ကခုန်ချစ်သူများ, ဘောလုံးနှင့်ကန်တိုက်ပွဲများများအတွက်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Xbox One မှာအကောင်းဆုံးအားကစားပြိုင်ပွဲ 2018
ဝေး Cry 5
လယ်ယာ Simulator 2019
Monster Hunter: ကမ္ဘာ့ဖလား
Xbox 360 တို့အတွက် 2018 ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိမ်း
ကိုယ့် 2019 ကခုန်
tank ၏ကမ္ဘာ့ဖလား: ကြေးစား
အမေရိကားမှာရှိတဲ့တီထွင်ပြည်နယ်များအနေဖြင့်သမုဒ္ဒရာအတွင်းလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကျွန်းများမှ: ဤသေနတ်သမား, ကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်တွေ့ရှိနေရသည်သော - တဲ့ Xbox One များအတွက်ယခုနှစ်စိတ်ဝင်စားဖို့စီမံကိန်းများကိုအများစုဟာ။
ဒီ Third-လူတစ်ဦးသေနတ်သမား၏ဇာတ်ကောင် - တစ်ဦးကိုအပူတပြင်းကောင်းဘွိုင်အာသာမော်ဂန်သည်တောရိုင်းအနောက်ဒမြ၏ကမ္ဘာ၏ပုံမှန်ကိုယ်စားလှယ်။ 20 လူမျိုး၏ဂိုဏ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သူကဘဏ်တစ်ခုကြိုးစားခဲ့လုယက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်မအောင်မြင်ခဲ့သညျ။ အခုတော့-ပါလိမ့်မယ် Raiders ဖုံးကွယ်ဖို့ရှိသည်။ ထိုသူတို့၏လမ်းကြောင်းအပေါ်တစ်ဦးစုံထောက်အေဂျင်စီ၏န်ထမ်း, ဒါပေမယ့်လည်းပြိုင်ဘက်ဂိုဏ်းကိုယ်စားလှယ်များသာဖြစ်ကြသည်။
Network မှဗီဒီယိုဂိမ်းဟာနည်းဗျူဟာသေနတ်သမား, အခန်းကဏ္ဍကို-ကစားများနှင့်နည်းဗျူဟာပေါင်းစပ်။ အသုံးပြုသူအပေါ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအရာဘက်တစ်ဦးရှေးခယျြမှုရှိပါတယ်:
အဆိုပါဂိမ်းတပ်မှူးရာထူးတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်စနစ်အားလည်ပတ် - ထိုစနစ်ကပြိုင်ဘက်၏အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးကိုရွေးပါလိမ့်မယ်, ရမှတ်အများဆုံးအရေအတွက်ကရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါဂိမ်းဒေသခံရဲအရာရှိအလွန်အန္တရာယ်များသောဘာသာရေးဂိုဏ်းဆန်သောဘယ်မှာစိတ်ကူးယဉ်အမေရိကန်ပြည်နယ်, နေရာကြာပါသည်။ ပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီးဂိမ်းကိုသင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်ပြုသည်နှင့်ဇာတ်ကောင်အယ်ဒီတာသူ၏အသားအရေရဲ့အရောင်အပါအဝင်အဓိကအရေးယူသူရဲကောင်းများများအတွက် features တွေ၏နံပါတ် configure လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းရှေးခယျြပါနှင့်လက်နက်များနိုင်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်သေနတ်များ, စက်သေနတ်, လေးနှင့်ပင် Molotov ကော့တေးရှိပါတယ်။
ဂိမ်းဇာတ်ကောင် - ကမ္ဘာတဝှမ်းမစ်ရှင်ထွက်သယ်ဆောင်သူတစ်ဦးကိုငှားရမ်းလူသတ်သမား။ Hitman2လူသတ်သမားကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိခြောက်လတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်ရမယ် - သိပ်သည်းအပူပိုင်းသစ်တောများမှကြီးမားသောမြို့ကြီးများ၏အပူလမ်းများအတွက်နေရပ်ရင်းရန်။ Multi-user mode ကိုမှစွမ်းရည် - ဂိမ်း၏ပထမအစိတ်အပိုင်းကိုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တို့တွင်တီထွင်မှုတစ်ခုအရေအတွက်ရှိထင်ရှား။ ,
တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာခြင်းနှင့် vyolnyay အလုပ်အကိုင်များ
ယခုပင်လျှင် 2019 ခုနှစ်ဂိမ်းကစား Simulator ကိုအတူအကြိုက်ဆုံး ပို. ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယခင်ဗားရှင်း၌ရှိသကဲ့သို့, အသုံးပြုသူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ပြီးယင်း၏အောင်မြင်သောအလုပ်စုစည်းဖို့။ ယခုမှာအကြောင်းအဘို့အ tool များ၏လက်နက်တိုက်များကြောင့်, လယ်ထွန်စိုက်ပျိုး, fertilizing နှင့်ရိတ်သိမ်းသစ်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ စပါးရိတ်ရာကာလကိုစုဆောင်းရမယ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအမြတ်အစွန်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့အပြင်ကစားသမား, သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသရုပ်ပြရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါချစ်ရာသခင်၏တိုးတက်မှု Simulator ကိုဗားရှင်း
နာမည်ကျော် Monster Hunter ဇာတ်လမ်းတွဲ၏နောကျပိုငျးတှငျအဆိုပါကစားသမားသည်အလွန်အန္တရာယ်များသတ္တဝါများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားနှငျ့ရငျဆိုငျရလိမျ့မညျ။ ရရှိနိုင် multiplayer mode ကို။ သမဝါယမကစားအထိလေးကစားသမားများ၏ပါဝင်မှုပါဝငျသညျ။ သူတို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ - လက်နက်နှင့်ကြီးမားသောမိကျောင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာသူတို့ရဲ့နည်းလမ်းများ၏ကြီးမားသောလက်နက်တိုက်။ ဂိမ်းရဲ့ features တွေကိုတစ်ခုမှာဆိုးရွားသောအမှားတွေလုပ်မပေးအဖြစ်ဒါကြောင့်အလွန်ဂရုတစိုက်ရာအရပ်ကိုယူရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်: မစ်ရှင်အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။
ဘဏ္ဍာမုဆိုး - တစ်ပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူစွန့်စားမှုဂိမ်းအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးကိုမှန်ကန် "ပင်လယ်ဝံပုလွေ" ကဲ့သို့ခံစားရရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရရန်, ကစားသမားတိုက်ပွဲတွေအများကြီးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နှင့်တစ်ဦးပါကျွန်းထက်ပိုစူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဂိမ်းကစားအပေါ်ကြိုးစားလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအခွင့်အလမ်းလိုလျှင်မည်သို့ပင်: ငြိမ်းချမ်းသောကုန်သည်, ကိုယ်ပိုင်စင်းကိုသို့မဟုတ်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဓားပြ၏ပိုင်ရှင်ဂြိုလ်သားသင်္ဘောများတိုက်ခိုက်ခြင်း။
ဒီဂိမ်းထဲမှာသင်ကတောက်ပဂရပ်ဖစ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Adventures ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်
12 လအတွင်းအဘို့, Xbox 360 တို့အတွက်ကျယ်လောင် Premier အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောပရိတ်သတ်များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
ဘောလုံး stimulator သင်စီမံကိန်း၏ဗားရှင်းအသစ်အတွက်အရာများ၏အရေအတွက်ကိုသိသိသာသာတိုးလာခဲ့ကြောင်းတော်တော်များများဂိမ်း Modes သာတဦးရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, "no စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို" (သတိပေးချက်များလက်ခံရရှိမပါဘဲ) အရေးမယူရန်ကစားသမားများပုပ်မှခွင့်ပြုပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီရည်မှန်းချက်များထဲမှအားကစားသမားများအတွက်အသင်းထံမှယူသွင်းယူပြီးနောက် mode ကို "Survival" ဟုအဆိုပါအဖွဲ့၏နံပါတ်လျော့ကျစေပါတယ်နေစဉ်။ မျှော်လင့်မထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေ Mode ကို "ကို Play ... " ထောက်ပံ့: ဒီမှာအသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်စည်းမျဉ်းအချို့မှကစားသမားဆုံးဖြတ်သည်နှင့်ဂိုးသွင်းအဖွဲ့များများအတွက်ကန့်သတ်မိတ်ဆက်။ ဘောလုံးကွင်းအပြင်, ဂိမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသမိုင်းရှိပါတယ်: ကြယ်ကစားသမားသည်ယခုအခါမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကို run ခြင်းနှင့်သူတို့ထံမှခွဲဝေခံယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါပြီးသားလူသိများတေးဂီတနှင့်ကခုန်ဂိမ်းအသစ်အစိတ်အပိုင်း။ အဆိုပါသိပ်ပြီးများ၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာတိုးချဲ့ကစား-စာရင်း (က 40 အသစ်များကိုသီချင်းတွေကိုကြောင့်တိုးပွားလာ) အဖြစ်ထပ်တိုး features တွေတစ်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဂိမ်းကလေးကဖှံ့ဖွိုးတိုးတအထူးကုအတွက်စီမံကိနျးအတှကျအထူးတီထွင်ကလေးရှစ်ယောက်ကအခုန်, ကထပ်ပြောသည်။ အခုဆိုရင်ကလေးတွေလည်းပဲအကနှင့်အတူကခုန်ဖို့ကြိုးစား, နှင့်တစ်ဦးချင်းစီဖျော်ဖြေပွဲအကဲဖြတ်မှုစနစ်အတွက်သူတို့ကိုထောကျပံ့များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမှတ် ထား. အဖြစ်အထူးဂိမ်းကလေးကခုန်ဆရာမအတွက်မိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီစီးရီးဘယ်လာရုစ်အနေဖြင့်တစ်ဦး Arcade အကြံပေးအဖွဲ့ Simulator ကို developer များဖြစ်ပါသည်သစ်တစ်ခုအဆင့်ပရောဂျက်ကြာပါသည်။ အသုံးပြုသူအာရုံကိုသဘာဝတွင်တည်ရှိမထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်များ, တိုက်ခိုက်နေပြနေကြသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာကမ္ဘာတဝှမ်းကနေတင့်ကားများဖန်တီးသူကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပေါင်းစပ်။ အမေရိကန်နှင့်သေနတ်များ - - ဂျာမန်ဥပမာအားဖြင့်, အိမ်ယာအတွက် hybrids တွေကိုအခြို့ကိုဆိုဗီယက်တာဝါတိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂိမ်း updates များကိုအတော်များများလည်းလက်ခံရရှိခဲ့သည် - ထိုကစားသမားသည်ယခုအခါပိုမိုအဆင့်မြင့်ကြေးစားစစ်တပ်ဆန့်ကျင်သည်ကို ထောက်. , ပိုမိုရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်တင်းမာနေဖြစ်လာသည်။
- ကို virtual လမ်းညွှန်၏ညွှန်ကြားချက်အောက်၌အခြားနိုင်ငံများ၏ယဉ်ကျေးမှုသို့ထိုးဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသူတို့ရဲ့အသိပညာတိုးပွားစေဖို့နဲ့ကခုန်ဖို့သင်ယူဖို့: 2018 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဒီဇင်ဘာလမှပေးအပ်, Xbox One နဲ့ Xbox 360 ၏ပိုင်ရှင်များစိတ်ပျက်မပြုခဲ့အသစ်ဂိမ်းများကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းအကောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှသာအချိန်ဖြုန်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါပြီ။